Maxay Unai Emery & Pochettino Ugu Ducaysanayaan In Ay Barcelona Soo Ceshato Neyma JR? - Gool24.Net
Maxay Unai Emery & Pochettino Ugu Ducaysanayaan In Ay Barcelona Soo Ceshato Neyma JR?
Kooxaha Arsenal iyo Tottenham ayaa rajaynaya in Barcelona ay ku guulaysato soo celinta xidigii kooxdeeda ee Neymar Jr waxayna ka dhex arkeen faa’iido wayn oo ay heli karaan haddii uu xidiga reer Brazil ku soo laabto Camp Nou.
Kooxaha Arsenal iyo Tottenham ayaa isha ku haya in ay Barcelona kala soo saxiixdaan Malcom kaas oo ay hore ugu dagaalamayeen intii aanu Barca dooran, laakiin waxay kaga xidhan tahay in Neymar Jr uu Barca ku soo laabto.
Barcelona ayaa haddii uu Neymar Jr ku soo laabto Camp Nou waxay kooxdeeda ka diri doontaa xidigo dhawr ah waxaana la filayaa in Malcom uu ka mid noqon karo ciyaartoyda dheeraadka ka noqon doona qorshaha Valverde.
Tababaraha kooxda Tottenham ee Mauricio Pochettino oo todobaadkan war layaableh sheegay isla markaana jamahaiirta kooxdiisa kaga nixiyay in aanu marnaba yeelan go’aanka kama danbaysta ah ee saxiixyada kooxdiisu samaynayso ayaa doonaya in Malcom la keeno kooxdiisa Spurs.
Unai Emery ayaa isna doonaya in Malcom uu ka mid noqdo ciyaartoyda ay kooxdiisu la soo saxiixan karto iyada oo Gunners isku dayi karta iib ama ahaah haddaba kii ay Barcelona kaga heli karto xidiga reer Brazil ee Malcom.
Malcom ayaa hal xili ciyaareed oo kaliya ku soo qaatay Barcelona kaas oo aanu waliba helin fursadii uu ka filayay, waxayna Barcelona hadda muhiimada siinaysaa Neymar Jr iyo Griezmann taas oo hubaal ka dhigi karta in Malcom iib ama ahaam lagu diri karo.
Kooxaha Tottenham iyo Arsenal ayaa xaalada Malcom la socday intii aanu Barcelona ku biiray waxaana jiray waqti la filayay in uu London ka soo degayo balse markii ay AS Roma ku guulaysatay saxiixa xidigan waxaa soo dhex gashay Barca oo si layaableh uga dul qaaday.
Malcom ayaa u furnaan kara in uu ku biiro kooxaha reer London haddii uu xaqiijisto in aanu qayb ka ahayn qorshaha Valverde laakiin haddii ayna Barcelona kuwada guulaysan saxiixyada Griezmann iyo Neymar waxa uu sii joogi karaa Barca.
Si kastaba ha ahaatee, Mauricio Pochettino iyo Unai Emery ayaa si toos ah ugu dagaalami kara saxiixa Malcom haddii ay suurtogal noqoto in ay Barca xidiga reer Brazil o ogolaato in uu baxo.